🥇 ▷ Port Royale 4 waxay xaqiijineysaa imaatinkeeda Xbox One at Gamescom 2019 ✅
Port Royale 4 waxay xaqiijineysaa imaatinkeeda Xbox One at Gamescom 2019
Istaraatiijiyadda iyo maaraynta hiddaha ayaa ah nooc hufan oo leh aaminaado badan oo taas si tartiib tartiib ah u soo jeedineysa soo jeedinno cusub. Thanks to the Gamescom Open Night dhacdo oo ay qabatay Gamescom 2019, waxaan baranay horumarka Port Royale 4 Waxay ku taal wadada saxda ah waxayna gaari doontaa dekedo kaladuwan, kumbuyuutarro iyo kumbuyuutarro. Thanks to trailer kuu oggolaanaya inaad ku ogaato soo-jeedinta Port Royale 4, waxaan ognahay inay gaari doonto Xbox One.
Haatan waxaan ku qasbanahay inaanu degno garoonkan xayeysiinta ah ee lagu daabacay Ciyaaraha Fudud ee Ciyaaraha, halkaas oo la xaqiijiyay in Port Royale 4 lwuxuu ka tagi doonaa labadaba Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch sida PC-ga 2020-ka.
Waxa kaliya ee aan ka qoomameyn karno waa inaysan iyagu aad u ballaarin markii ay soo bandhigayaan Port Royale 4 at Gamescom 2019 hadda. Waa macquul in maalmaha soo socda aan helno warar dheeri ah, in kasta oo aan dib u eegis ku sameyno wixii lagu yaqaanay ciyaarta, waxaan ka qeyb geli karnaa faahfaahinta ugu horreysa ee soo jeedintan.
Port Royaale 4 waa sii wadida guulaha lagu gaadhayo ee jilitaanka dhaqaalaha ee lagu dejiyay xilligii gumeysiga ee Caribbean-ka qiyaastii 1600 oo loo heli doono kombuyutarada PC iyo consoles. Awoodaha gumeysiga weyn ee Spain, England, France iyo Netherlands waxay u dagaallami doonaan sarreynta. Adduun weyne 3D ah oo ka dhiga wax soo saarka, ganacsiga, dhismaha magaalada iyo qulqulka ganacsatada, budhcad-badeedda, kuwa wax iibsada, kuwa ugaarsada qaaliga ah iyo kolonyada militariga ee Caribbean-ka.
Waa inaan sugno daraasadda ‘Gaming Minds’ si aan u siidno faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan soo-jeedintan oo u baahan is-maalgelin si ay u suurtagasho in la gaaro. Maalgelin taas ka caawisay inuu ballaariyo himilooyinkiisa oo aan ku koobnayn inuu arko nalka oo keliya PC. Hammad leh abaalmarinteeda kahor intuusan bixin Port Royale 4 sidoo kale loo adeegsado Xbox One, Nintendo Switch iyo Playstation 4.